Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'i Monaco » Prince Albert II mba hahatsiarovana ny nahaterahan'ny zanakavavin'i Monaco teraka tany Etazonia voalohany tany New Orleans
Mpandova tsara tarehy teraka tany New Orleans 'French Quarter tamin'ny taona 1857 izay nanambady ny Mpanjakan'ny Monaco, Prince Albert I, hotsaroana amin'ny volana ho avy ity rehefa avy mitsidika ny Big Easy ny Printsy ambony Andriamatoa Albert II avy any Monaco, any Big Easy hamoaka ny takelaka takela-bato eo amin'ny toerana nahaterahany - mety, ao amin'ny Royal Street.
Efa ho 70 taona talohan'ny fandresena ho an'ny Academy-Award an'ny loka Academy, Grace Kelly dia nanambady an'i Prince Rainier III ary lasa Princess Grace, Miss Marie Alice Heine, nanambady an'i Prince Albert I tamin'ny taona 1889 tany Paris, lasa Princess Serie Highness of Alice of Monaco.
Ny fanambarana ny fitsidihan'ny Prince Albert ho avy izao dia nataon'ny masoivoho Monaco ho any Etazonia, Maguy Maccario Doyle, raha nanatontosa antsipirian'ny Monaco Takes New Orleans izy, andiany iray maharitra herinandro izay nanomboka ny 25 febroary izao hanamarihana ny fifandraisana lalina misy eo amin'ny Principality. ary New Orleans, ary "fanomezana" faha-300 taonan'ny tanàna.
"Mba hankalazana ny fatorana manan-tantara sy ara-kolontsaina tamin'ity tsingerintaona lehibe ity dia faly aho manambara fa ny Mpanjakantsika, Andriamatoa Serene Andriamatoa Albert of Monaco, dia ho tonga amin'ny volana New Newle any New Orleans hamaky takelaka fahatsiarovana ny toerana nahaterahan'i Alice, Princess an'i Monaco, izay vadin'ny raiben'ny raibeny, Prince Albert I, "hoy i Maccario Doyle.
“Ho fanomanana ity fitsidihana ofisialy ity dia hasehontsika (hatramin'ny 25 feb) ny lova ara-javakanto sy kolontsaina any Monaco ary koa ny tsiro amin'ny fahandroana azy, ary faly aho miverina eto, sambany tao anatin'ny folo taona, ilay tropy talenta an'ny Les Ballets de Monte Carlo. Voninahitra manokana fanampiny ho an'i Monaco ny maha-iray amin'ireo firenena voalohany nanome voninahitra ny antso maharitra nataon'ny Crescent City tamin'ny faha-300 taonany, ”hoy izy.
"Faly izahay manana ny maha-Principality of Monaco mandray anjara amin'ny New Orleans Tricentennial," hoy ny ben'ny tanàna New Orleans Mitchell Landrieu. “Rehefa mankalaza 300 taona an'ny New Orleans isika, dia hahatadidy ny fifandraisana ara-kolontsaina misy eo amin'ny tanànantsika sy Monaco. Tiako indrindra ny misaotra ny Ambasadaoro Maccario Doyle sy ny New Orleans Ballet Association izay nikarakara ity herinandro ity, ary manentana ny tsirairay aho hiaina ireo hetsika miavaka ireo. ”
Ny hetsika andiany New Monleans an'ny Monaco 2018 dia nokarakarain'ny Masoivohon'i Monaco any Washington, DC sy ny Consulat Général an'ny Monaco any New York, miaraka amin'ny fanohanan'ny Consulat Honorary any New Orleans. Miaraka amin'ny fisaorana manokana an'i Les Ballets de Monte-Carlo, ny New Orleans Ballet Association, Hyatt Regency Hotel New Orleans, NOPSI Hotel New Orleans, Angela King of Angela King Gallery, Monte-Carlo SBM, New Orleans Convention Company (NOCCI), ny birao an'ny Ben'ny tanànan'i New Orleans, Mark Romig, Alex Soldier Jewelry, ary ny Princess Grace Foundation-USA.
Tendrombohitra tsara indrindra eran-tany amin'ny taona 2018 voatondro